Korsada photoshop cc – Afထgy Platform
Korsada photoshop cc
Afoogy Questions › Category: Cilad Farsamo afoogy › Korsada photoshop cc
sheikhan asked 3 months ago
Koorsada wa photoshop
casharka 5:4 sidee labada sawir isidulsaarti
casharka 5:5 quick selection tool ma arki haya
labadaas cashir mafahmin walal
Salmaan Maadow Staff answered 3 months ago
su’aasha kowaad 5.4 waxaa ka maamulee dhanka layerska, marka saa safcn u fahamtid layerska fadlan waxaa ku laabata lawada cashar 4.1 iyo 4.2 wuu ku fududaan, haduu wali wax mugdi jiro ila soo socodsii.
Su’aasha labaad 5.5 quick selection tool asoo faah faahsan waxaa ku arkee casharka 5.6 midka ku xega fiiri walaal.
1. talada kowaad shahadada in waqti lagu daro insha allah midaas waa qaadan waana lagu dari ..
2. codsiga hada shahado dabacayso walal waxa la isticmaala kuwa khaas ah ani ahaan waxaa kula talin lahayay shahadada ina gaysato wakaaladaha daabicitaanka saa u daabacato.
Tayib985 answered 3 months ago
Usaad waan kusalaamay marka hore
Ustaad waxaan dhameeyay Phtoshop CC
aaad ayeey ifarxad galisay inaan wax ka bartay afoogy adigana aad ayaan kuugu mahadcelinayay dadaalka aad gilisay sida bulshada aad wax oga badali laheeed.
Hal tala bixin iyo hal codsi
Tala bixinta: Shahadada aad bixisaan date/ Taariq malaha sidaadsi darteed waxaaan ku tala bixin lahaaa arday kasta iyo watiga aay ku qaadata inuu coursda dhameeyo in loogu qora shahaadada.
codsi : Hadii uu jira vedeo diyaarsan oo kahadalaya waraqaaadaha laisticmaalo marka la print gareenaya sawrida ( kuwa buuxaiyo kurkaba) iyo inaad iga jaahil bixiso in la isticmaaali karo print yada xafiisyada isticmaalaan madaama aay macqull tahay dhalinta inaay ku adkaata inaaay ibsadaan machin ka wayn ee laisticmaaalo.
Waad mahadsantihiihin .